Fidirana amin’ny fampiasa fandraketana an-tsarintany vaovao eny ankalamanjana any Okraina · Global Voices teny Malagasy
Tsy anavahana manana fahasebanana ny fahafahana miditra amin'ny fotodrafitrasa an-tanàndehibe
Voadika ny 21 Jolay 2021 4:02 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, বাংলা, українська, Português, Español, Dansk, English
“Ho aiza anio? Trohy ny fampiasa ary fantaro ny toerana azo idirana ao amin'ny tanàndehibe misy anao”. Pikantsary avy amin'ny tranonkala mampiseho sarintany Dostupno.UA.
Vao haingana ireo mpikatroka Okrainiana miaraka amin'ny Dostupno.UA, vondrona mpiaro ny zon'ny olona manam-pahasembanana, no namoaka sarintany ifarimbonana miaty fampahalalana fahafahana miditra any amin'ny toerana an-tanàndehibe miisa 800 manerana ny firenena.
Raha ny filazan'ireo mpikatroka, 27-55% eo ho eo ny mponina ao an-tanàndehibe any Okraina no manana fahafahana hafa mivezivezy na mihena ny fahafahany mivezivezy. Anisan'izany ireo olona manana fahasembanana, ray aman-dreny manan-janaka kely, ny beantitra, ny olona bevohoka, ary ireo izay vao sitrana tamin'ny ratra maro samihafa. Na izany aza, hitan'ny Dostupno.UA fa “ny 4% amin'ny fotodrafitrasa an-tanàndehibe any Okraina ihany no azo idirana feno” – ary eo ampanatontosana izany fanovana izany ry zareo.
Tamin'ny taona 2020 no namolavolana voalohany ny sarintany, fa mandrakotra tanàndehibe miisa 30, ao anatin'izany ny renivohitra Okrainiana, Kyiv, ny endriny vaovao 2021, vonona ho fampiasa amin'ny finday avo lenta ho an'ny Android sy iPhone. Misy ihany koa ny endriny vaovao amin'ny desktop amin'ilay sarintany ao amin'ny tranonkala Dostupno.UA.
Afaka manamarina ny toerana azo idirana ho an'ny “olona manam-pahafaha-mivezivezy hafa sy ireo voafetra ny fivezivezeny” ny mpisera. Ahitana toerana ho an'ny daholobe ao an-tanàndehibe toy ny zaridainam-panjakana, tranobe fitantanana sy kaominaly, trano fisakafoana sy fisotroana kafe, ary toerana fialamboly toa ny trano fijerena sarimihetsika na fampisehoana ny toerana voarakitra an-tsarintany.
Sokajian'ny sarintany Dostupno.UA ho “maintso” (ho an'ny azo idirana), “volomboasary” (azo idirana ihany) na “mena” (tsy azo idirana), arakaraka ny fikarohana nataon'ny mpikatroka ny fahafahana miditra amin'ny toerana iray. Ahafahan'ny mpisera manivana ny toerana amin'ny alàlan'ny zava-misy misongadina ihany koa izany, toy ny hoe manao ahoana ny fidirana amin'ny toerana iray (izany hoe, ny halehiben'ny varavarana na ny fisian'ny fiakarana na fidinana) ary na hoe misy trano fandroana azo idirana ve ilay izy, sa misy lisitra sakafo voatokana ho an'ny olona tsy mahita tsara, na afaka hanoloana zaza. Asongadina ihany koa ny toerana afaka hitondrana zaza, sy biby fiompy an-trano na azo handehanan'ny seza misy kodiarana.
Pikantsary avy amin'ny desktop endriny vaovao izay mampiseho ny toerana azo idirana ho an'ny tsenan-tsakafo ao Kyiv, toy ny fidirana, ny fandroana ary ny kojakoja hafa. Sary avy amin'ny Dostupno.UA.
Misy fitaovana mahasoa hafa ao amin'ity fampiasa ity ahafahan'ny mpisera mivezivezy amin'ny toerana nosafidiana amin'ny alàlan'ny famoronana làlana mety mankany amin'ny toerana aleha, arakaraka ny filan'ilay olona sy ny endrikendriky ny fahafaha-miditra takian'izy ireo. Azon'ireo mpisera atao ihany koa ny manampy ny toerana tiany manokana ho ampidirina ao amin'ny sarintany, izany dia manampy amin'ny fahazoam-baovao bebe kokoa amin'ny fijerena ny endrikendriky ny toerana azo idirana ao an-tanàndehibe.
Nilaza i Dmytro Shchebetyuk, mpanorina ny Dostupno.UA, izay ny tenany no mampiasa seza misy kodiarana, fa tsy ho an'ireo olona manana fahasembanana ihany io sarintany io.
Доступність потрібна всім і кожному в той чи інший період життя.
Це і батьки з дитячими візочками, і люди літнього віку, люди з інвалідністю, і вагітні. Загалом, якщо ви десь подорожуйте з важкою валізою, то відчуваєте певні труднощі від пересування. Більшість із нас постаріє, і тоді нам вся ця доступність теж буде потрібна..
Isika rehetra no mila mahafantatra ny toerana azo idirana amin'ny fotoana sasany amin'ny fiainantsika. Ny ray aman-dreny mitondra zazakely amin'ny posety, ireo zokiolona, olona manam-pahasembanana sy bevohoka. Na dia mandeha miaraka amin'ny valizy mavesatra fotsiny aza ianao dia ho voafetran'ny sakana ny fivezivezenao. Ho antitra ary mila izany fahafahana mivezivezy rehetra izany ihany koa ny ankamaroantsika.
Tamin'ny taona 2019, nankatoa ny fenitra nasionaly vaovao amin'ny fananganana i Okraina izay mitaky ny tompon'ny toerana azo idiran'ny daholobe sy ny toerana fialamboly hanome toerana ho an'ireo mpampiasa seza misy kodiarana. Tsy maintsy manome fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa manana fahasembanana na manana fivezivezena voafetra ihany koa ny toerana fandraisam-bahiny, raha mila manome toeram-piasana ho an'ireo mpiasa manana fahafahana hafa marobe kosa ireo mpampiasa.
Na izany aza, na dia ny manampahefana ao an-toerana aza indraindray dia manitsakitsaka ireo fenitra ireo: ohatra, tao Kyiv, nahatonga ny toerana tsy ho azon'ny olona manana fivezivezena voafetra andehanany ny fanavaozana ireo toeram-piantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka marobe tamin'ny taona 2019.
Nilaza i Shchebetyuk, izay niara-niasa tamin'ny Dostupno.UA nanomboka tamin'ny taona 2015 mba hahatonga ny fiarahamonina Okrainiana hampiaty sy ho azo idirana bebe kokoa, fa ny handrisika ireo tompona toerana fandraisan'olona mba hanamora ny fidirana ao amin'ny orinasan'izy ireo no tanjon'ny fampiasa. Fa manantena ihany koa izy fa hanome aingam-panahy an'ireo mpisera hivoaka ny tranony ilay fampiasa. “Arakaraka ny habetsahan'ny karazan'olona manam-pahafaha-mivezivezy hafa mandeha eny an-dalambe no mahabetsaka ny fangatahana fotodrafitrasa azo idirana,” hoy izy.
“Olya on the move,” dokambarotra ho an'ny fampiasa ahitana ny sarintany Dostupno.UA mampiseho ny karazan'olona an-tanandehibe mankafy ny toerana ho an'ny daholobe sy ny toerana fandraisan'olona na dia voafetra ihany aza ny fivezivezeny.